project management Jobs, Hiring, recruiting in project management Singapore | sg.jobs68.com
project management (76) Apply project management filter
#အရှေ့ဒဂုံစက်မှုဇုန်ရှိ Construction လုပ်ငန်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် 1.M&E Engineer (M-3) 400,000 (Code-...
#အရှေ့ဒဂုံစက်မှုဇုန်ရှိ Construction လုပ်ငန်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် 1.M&E Engineer (M-3) 400,000 (Code- S 37) - B.E(EP), AutoCAD 2D, 3D နှင့် Computer ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုတတ်ရမည်။ Installation ပိုင်းလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ၂ နှစ်အထက်ရှိရမည်။ အသက် ၂၅ နှစ်အထက် Email – cvform1@jobseekersmm.com အလုပ်ချိန်/ ပိတ်ရက် - (9:00...
*BAHRAIN:GROUP OF COMPANIES* *TOP URGENT* *ELECTRICIAN:20 NOS* *TO HAVE EXPERIENCE...
*BAHRAIN:GROUP OF COMPANIES* *TOP URGENT* *ELECTRICIAN:20 NOS* *TO HAVE EXPERIENCE IN SUB STATION ELECTRICIAN MUST WITH TRADE TEST.* *SALARY:150 BD+20 BD ...
Urgent Position We Are Urgently Looking For The Talent Who...
Urgent Position We are urgently looking for the talent who specialized in Metallurgy Engineering. *Fresh Graduate are welcome to apply. *Must be ...
Admin Pleasehttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=838210973040759&id=551503741711485 မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ Internet Service လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သော ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုတွင် လုပ်ကိုင်ရန်အမြန်အလိုရှိသည်။ Fiber Engineer (...
Admin please မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ Internet Service လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သော ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုတွင် လုပ်ကိုင်ရန်အမြန်အလိုရှိသည်။ Fiber Engineer ( FTTH ) - Male (2) Posts - Must be B.E graduated - Prefer2year experiences in related ...
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ Internet Service လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သော ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုတွင် လုပ်ကိုင်ရန်အမြန်အလိုရှိသည်။ Fiber Engineer ( FTTH...
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ Internet Service လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သော ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုတွင် လုပ်ကိုင်ရန်အမြန်အလိုရှိသည်။ Fiber Engineer ( FTTH ) - Male (2) Posts - Must be B.E graduated - Prefer2year experiences in related field - ...
Java,Android,PHP Lecturers ( Full Time And Part Time) Myanmar IT...
Java,Android,PHP Lecturers ( Full Time and Part Time) Myanmar IT Consulting မှ ရန်ကုန် အင်းစိန်လမ်းမ သံလမ်းမှတ်တိုင် အနီးတွင် အသစ် ဖွင့်လှစ်မည့် IT Software and Web Development Training Center တွင်… More တာဝန်ယူသင်ကြားပေးရန် Java,Android, ...
Urgent Position Area Engineer CPL / MCL Requirements: ...
Urgent Position Area Engineer CPL / MCL Requirements: - Preferred Bachelor Degree in mechanical or electrical discipline - Experience withaheavy industrial ...
#Adminတင်ခွင့်ပြုပါရှင် #Urgen¬t_post #Position :Business Development Manager#Location : MICT Park #Company...
#Adminတင်ခွင့်ပြုပါရှင် #Urgen¬t_post #Position :Business Development Manager#Location : MICT Park #Company : IT Company #Salary : Nego Age 22 – 30, Bachelor’s Degree in Economic (...
Play Video The Stabilization Of This Tank Is Amazing. Great Engineering! ...
Play Video The stabilization of this tank is amazing. Great engineering! If you are interested inacareer in mechanical engineering, please ...
Senior Civil Site Engineer - Male - Exp 4~7 Year...
Senior Civil Site Engineer - Male - Exp 4~7 Year - Salary Based on Experience - Yangon Region - RC - mail cv ...
Estimate ရက်တိုသင်တန်း (တန်းခွဲသစ်​ ) R.C.C Building (35000) ~~6 Storeyed (strip...
Estimate ရက်တိုသင်တန်း (တန်းခွဲသစ်​ ) R.C.C Building (35000) ~~6 storeyed (strip + mat foundation) drawing နှင့်သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ **Detail of measurement ** Builder Estimate ** Bill Of Quantity ** Abstract Of Cost **Summary အထိ ...
#Admin တင်ခွင့်ပြူပါ၇ှင်။ Japan သို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်လိုသည့် လုပ်သက်၂ နှစ်အတွေ့ အကြုံ ရှိ PHP...
#Admin တင်ခွင့်ပြူပါ၇ှင်။ Japan သို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်လိုသည့် လုပ်သက်၂ နှစ်အတွေ့ အကြုံ ရှိ PHP Developer ( JLPT N4) အောင်မြင်ထားသူများ ကို လစာ (သိန်း ၂၀) မှ စတင်ကမ်းလှမ်းထားပါတယ် ။ စိတ်ဝင်စားသူများ… More job.myanmarit@gmail.com သို CV Form များပေးပို့ လျောက်ထားလို့ ရပါတယ် ။ Myanmar IT Consulting အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက 09 259 288 199 , 09 250 35 25 75 , 09 450 917 999 ကို ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။#photo_crd
#Admin တင်ခွင့်ပြူပါ၇ှင်။ Japan သို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်လိုသည့် လုပ်သက်၂ နှစ်အတွေ့ အကြုံ ရှိ Java...
#Admin တင်ခွင့်ပြူပါ၇ှင်။ Japan သို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်လိုသည့် လုပ်သက်၂ နှစ်အတွေ့ အကြုံ ရှိ Java Developer ( JLPT N4) အောင်မြင်ထားသူများ ကို လစာ (သိန်း ၂၀) မှ စတင်ကမ်းလှမ်းထားပါတယ် ။ စိတ်ဝင်စားသူများ… More job.myanmarit@gmail.com သို CV Form များပေးပို့ လျောက်ထားလို့ ရပါတယ် ။ Myanmar IT Consulting အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက 09 259 288 199 , 09 250 35 25 75 , 09 450 917 999 ကို ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။#photo_crd
Vacancies!!!!! Vacancies!!!!! Vacancies!!! This Is To Inform...
Vacancies!!!!! vacancies!!!!! Vacancies!!! This is to inform the general public that there are offers for various field in Canada, USA, UK, Australia ...
တနင်္ဂနွေသီးသန့်သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ပါမည်။ Singapore တွင် QSအလုပ်ဖြင့်သွားရောက်အလုပ်ရှာဖွေလိုသူများအတွက်ယခုသင်တန်းကိုစတက်ရပါမည်။ 19.8.2018 (တနင်္ဂနွေ)သင်တန်းစပါမည်။ Building Structure Measurement Course(9am...
တနင်္ဂနွေသီးသန့်သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ပါမည်။ Singapore တွင် QSအလုပ်ဖြင့်သွားရောက်အလုပ်ရှာဖွေလိုသူများအတွက်ယခုသင်တန်းကိုစတက်ရပါမည်။ 19.8.2018 (တနင်္ဂနွေ)သင်တန်းစပါမည်။ Building Structure Measurement Course(9am -3pm) Fee= 60,000 ks Building Architecture Measurement Course (3:30-9:30pm) Fee=80,000 ks Total4days( Sunday ...
Required For Oman- Al Turki Skype Interview In Mumbai...
Required For Oman- Al Turki Skype Interview in Mumbai on 8th August 10.00 A.m to 1.00 p.m Required gulf Experience candidates those ...
Please Adminhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1888660308097101&id=100008594509346 Dear All, Who Is Interested To Work As An...
Please Admin Dear all, Who is interested to work as an Environmental (ESIA) Engineer at Artelia? Please see the following information and ...
#သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိFurniture_Distributionလုပ်ငန်းတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် Interior Designer [Code S-23] (Female- 2)...
#သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိFurniture_Distributionလုပ်ငန်းတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် Interior Designer [Code S-23] (Female- 2) -လစာ 350,000- 500,000 / Uniformရှိသည် -ဘွဲ့ရ, Interior Designer Exp:2years (Furnitureပိုင်း), 3Ds Max Software ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမည် ***(အင်တာဗျူးတွင် Designဆွဲခြင်းများအား Testဖြေရမည်)*** အလုပ်ချိန်/ပိတ်ရက် ~… More 9:00...
#Admin တင်ခွင့်ပြုပါရှင် #Urgent_Post#Position : Sale Engineer ( M )...
#Admin တင်ခွင့်ပြုပါရှင် #Urgent_Post#Position : Sale Engineer ( M ) #Location : MICT Park #Company : Telecom Company #Salary : Nego Requirement ; - Any Graduated. B.Sc ( Computer ) ...
*Are You Seating At Home And Looking For Job In...
*Are you seating at home and looking for job in Mumbai and do you have your own2wheeler with licence and Android ...